Amazon iyo Door Halis ah Waxay xaqiijiyaan Halyeyga Mashiinka Vox Xiliga 2! - Madadaalo
Amazon iyo Door Halis ah Waxay xaqiijiyaan Halyeyga Mashiinka Vox Xiliga 2!
VOX MACHINA XILLIGA 2AAD AYAA XAQIIJIYAY HALISTA
Sheekada Xilliga Vox Machina 2 waa sida soo socota:
Xiliga 2 ee The Legend of Vox Machine waxa la sii dayn doonaa Taariikhdan.
Xiliga 2 Taariikhda Premiere ee Halyeyga Mashiinka Vox
Xiliga 2 ee Halyeyga Mashiinka Vox
Xilliga 2 Trailer ee Halyeyga Mashiinka Vox:
Xilligii ugu horeeyay eeHalyeeyga Vox Machinahadda wuu dhammaaday, laakiin taageerayaashu waxay neefsan karaan neefta nasashada iyagoo og in axilli labaadayaa mar hore la dalbaday.
Ciyaarta fiidyaha/ miiska dushiisa - inkaarta la qabsiga telefishinka hadda ma dhammaatay? Castlevania ayaa ahayd tii ugu horreysay, waxaa ku xigay Arcane iyo DOTA: Dhiiga Dragon, kaasoo kor u qaaday laqabsiga ciyaaraha-TV-ga ee heerar cusub.
Halyeyga Vox Machina, oo ah taxane muuqaal ah oo Dungeons & Dragons-ku dhiiri galiyay, ayaa hadda mahad leh Door Halis ah iyo Istuudiyaha Amazon.
Taxanaha ayaa dhawaan dhamaaday, iyadoo seddexda qaybood ee ugu dambeeyay ay hawada soo galeen horaantii maanta, laakiin taageerayaashu aad ayey ugu farxeen inay ogaadaan in xilli labaad ee Legend of Vox Machina mar hore la xaqiijiyay!
Amazon Prime Studios iyo kooxda wax soo saarka doorka Halis ah ayaa hore u xaqiijiyay Xiliga 2 ee Legend of Vox Machina.
Xaqiiqda, markii The Legend of Vox Machina markii ugu horreysay la shaaciyay Noofambar 2019, xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha filimka la garaacay ayaa la dalbaday.
Dadaalka Kickstarter wuxuu caawiyay maalgelinta tobanka qaybood ee ugu horreeya bandhigga Dungeons & Dragons-ka cusub, marka loo eego Noocyada kala duwan. Amazon Prime Video, dhanka kale, waxay si cad u aragtay suurtagalnimada bilawga, iyagoo dalbanaya 14 qaybood oo dheeraad ah, taasoo keentay tirada guud ee dhacdooyinka 24 oo ku saabsan laba xilli.
TheHalyeeyga Vox Machinawaa taxanayaal telefishan oo fantasy ah oo qaangaar ah oo Mareykan ah oo ka soo muuqday Amazon Prime Video onJanaayo 28, 2022. Waxaa abuuray Soo saarista Doorka Khatarta ah, Titmouse, Inc., iyo Amazon Studios. Waxay ku saleysan tahay ololihii ugu horreeyay ee taxanaha khadka tooska ah ee Dungeons & Dragons Critical Role. Matthew Mercer, Ashley Johnson, Travis Willingham, Laura Bailey, Liam O'Brien, Taliesin Jaffe, Marisha Ray, iyo Sam Riegel ayaa ka soo noqday ololihii Doorka Halis ah ee ugu horreeya ee taxanahan. Sitcom-ka waxaa u cusboonaysiiyay Amazon xilli labaad bishii Noofambar 2019, ka hor intaan la soo bandhigin.
Sheekada waxaa lagu dejiyay Exandria, caalam khayaali ah oo uu abuuray Matthew Mercer ololihiisa gaarka ah ee Dungeons & Dragons ee 2012, ka dibna loo beddelay taxanaha internetka ee Doorka Halis ah ee 2015. Inta badan ficilku wuxuu ka dhacaa qaaradda Tal'Dorei, gudaha goobaha sida Emon's metropolis iyo Whitestone's city-state.
Akhri wax dheeraad ah: Atlanta Xiliga 3 - Taariikhda Siideynta: La Xaqiijiyay Mise La Joojiyay?
Dabaqan cusub oo dhan oo ku saabsan kooxda Vox Machina ee todobada xubnood ka kooban ee heerka D&D ee 7 ee hammigoodii ugu horeeyay ee 'koray', kaas oo dhaca kahor bandhiga hore ee doorka Critical Role's RPG, marka loo eego labada qaybood ee ugu horeeya. Arc Briarwood ee taxanaha shabakada asalka ah ayaa loo habeyn doonaa taxanaha, kaas oo shaqaalaha Vox Machina ay uga aargudanayaan xumaanta Lord iyo Lady Briarwood ee dhimashada taliyayaasha magaalada Whitestone iyo inta badan caruurtooda. Taxanuhu wuxuu sidoo kale la qabsan doonaa halyeeyada kale ee dabaqyada Vox Machina.
Sitcom ayaa dib loo cusboonaysiiyay xilli labaadAmazon bishii Nofeembar 2019, ka hor inta aan la soo bandhigin.
Xilliga 2 ee Legend of Vox Machine ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo 2023. Xilliga 2 ee Legend of Vox Machine ayaa soo jiitay xiisaha qof kasta, iyo daawadayaasha AMAZON PRIME's Taxanaha Shabakadda waxay rajeynayaan xilliga soo socda.
Halyeeyga Mashiinka Vox: Xiliga 1 Qarsoodi ayaa laga tagay jawaab la'aan gabagabada, dhisitaanka rajada xilliga 2 ee Legend of Vox Machine. In kasta oo xaqiiqda ah in aysan jirin taariikhda siideynta rasmiga ah ee Legend of Vox Machine xilli 2, waxaan awoodnay inaan aruurinno macluumaadka ku saabsan xilliga soo socda ee la bilaabay ilo kala duwan oo sumcad leh. Waxa laga yaabaa inaad had iyo jeer hubiso Xiliga Spy si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee taariikhda siidaynta xilli ciyaareedka soo socda.
Akhri wax dheeraad ah: Xiliga Wiilasha 3: Taariikhda Siideynta La filayo & Cusbooneysiinta!
Inkasta oo tani aysan ahayn taariikhda siideynta rasmiga ah ee soo saarista, Legend of Vox Machine xilli 2 ayaa la qorsheeyay in lagu soo bandhigo AMAZON PRIME dabayaaqada 2022. Intaa waxaa dheer, dhammaan wararka warbaahinta bulshada iyo weedhaha tuurista ayaa la falanqeeyay si loo dhiso taariikhda la sii daayo. Ugu dambeyntii, tani waa taariikhda ugu macquulsan ee xilliga labaad ee Legend of Vox Machine in la sii daayo. Tan waxa laga yaabaa in dib loo dhigo saamaynta covid. Waan idinla socodsiin doonnaa hadba inta ay arrimuhu socdaan. Taariikhda siideynta rasmiga ah iyo sidoo kale teaser-ka LEGEND OF VOX MACHINA SEASON 2 ayaa dhawaan shaaca laga qaadi doonaa. Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyaaqday xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Legend of Vox Machine. Shakiga, dhanka kale, waa isku mid xilli 2 ee Legend of Vox Machine.
Sababtoo ah The Legend of vox machine season 1 ayaa ka tagay su'aalo gaar ah oo aan laga jawaabin, taageerayaashu waxay si xiiso leh u filayaan Legend of vox machine season 2 siidaynta iyo sii wadida qisadii hore. Intaa waxaa dheer, taageerayaasha The Legend of Vox Machine xilli 2 waxay dhiseen goob aad u kala duwan. AMAZON PRIME waxay haysataa taxanahan khadka tooska ah ee la heli karo.
Taageerayaasha The Legend of Vox machine season 1 ayaa si xamaasad leh u sugaya sii deynta xilli ciyaareedka 2 trailer. Taageerayaasha, dhanka kale, runtii aad ayey ugu faraxsan yihiin Legend of vox machine season 2 teaser, iyo bilaha soo socda, waxaad filan kartaa wax yar oo kale The Legend of vox machine season 2 Teaser Rasmiga ah ama Trailers. Bal aan eegno muuqaalka hoose.
Alex Rider Xiliga 3: Taariikhda Siideynta: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay inaad Ogaato!
Xumaanta Aynu Jecelnahay Inaan Necbano: Black Adam
waa maxay mareegaha aan ka daawan karo cayaaraha tooska ah ee bilaashka ah
halkee ka soo dejisan karaa bandhigyada tv -ga bilaashka ah
xbox one 25 code qof
daawo bandhigyada tv -ga iyo filimada
uumi download lagu xanibay dugsiga